Zapiet: Shopify ဖြင့်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုကိုဝယ်ယူပါ Martech Zone
COVID-19 ပြန့်ပွားမှုမှနိုင်ငံများနှင့်သီးခြားဖြစ်နေသောကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအလုပ်လုပ်ရန်၊ တံခါးများကိုဖွင့်ရန်နှင့်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ရုန်းကန်နေရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်စုံတွဲနှစ်လတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်aIndianapolis တွင်အစာဖြန့်ဝေနေသည့်ဒေသခံလယ်ယာလုပ်ငန်း သူတို့ရဲ့နှင့်အတူ Shopify တပ်ဆင်ခြင်း။ သူတို့မှာရောင်းချသူအတော်များများရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ငါမလာခင်ကစနစ်ကိုတပ်ဆင်ခဲ့တယ်၊ ငါကူးစက်ရောဂါဖြစ်တဲ့အခါပေါင်းစည်းမှုနဲ့အကောင်းမြင်မှုကိုတင်းကျပ်ဖို့ငါလုပ်နေတယ်။
၀ ယ်လိုအားနှင့်အတူတက်နေရန်ယခုအခါခြံသည်နေ့ရောညပါအလုပ်လုပ်နေသည်။ ၀ န်ထမ်းများသာမက ၀ န်ထမ်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ သူတို့မှာဘယ်သူ့မှာကူညီရမလဲဆိုတဲ့နည်းပညာမရှိဘူး။ သို့သော်သူတို့၏ Shopify တပ်ဆင်မှု၏ထင်ရှားသောအချက်တစ်ခုမှာတည်ဆောက်ခဲ့သော application တစ်ခုဖြစ်သည် Store Pickup နှင့် Delivery အတွက် Zapiet.
Zapiet စတိုး Pickup + Delivery
သူတို့ရဲ့ app နဲ့အတူငါသီးခြားဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ် စာတိုက်ကုဒ်အခြေစိုက်ဇုန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအချိန်နှင့်ပေးပို့ရက်ကိုသတ်မှတ်ပြီ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အမှာစာများကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ရန်စတိုးဆိုင်နေရာများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံဖြည့်တင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အဘိတ်ပြင်ဆင်ချိန်များက ၀ န်ထမ်းများအားအမှာစာများစုဆောင်းရန်၊ ဝန်တင်ရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့အားကောက်ယူရန်အချိန်ပေးနိုင်စေသည်။ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူရဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ဆီမှာသူတို့ပို့ပေးတဲ့အင်အားရှိတယ်။ ဒီ app သည်အခြားပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။
Shopify လှည်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းသည်ဖောက်သည်များမှပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ခြင်းပစ်ကပ်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုပို့ပြီးပါကစာတိုက်သင်္ကေတများ (သို့) ဇစ် (လ်) များကိုပို့ဆောင်မည့်တည်နေရာတစ်ခုအနေနှင့်အတည်ပြုပြီးသင့်တော်သောပေးပို့မည့်နေ့ရက်ကိုရွေးချယ်ရန်ရက်စွဲရွေးချယ်သူကိုပေးထားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စတိုးဆိုင်ဝယ်ယူသူဖြစ်ပါကအနီးဆုံးဆိုင်ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ သင့်တွင်တည်နေရာတစ်ခုသာရှိပါကသင်မှာယူမည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီမှာကျွန်တော့်ဖောက်သည်ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာကြည့်ရအောင်။
ဘေးထွက်မှတ်စု: သင် Indiana ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး Tyner Pond Farm အိမ်သို့ပြန်ပို့လိုပါကဤနေရာတွင်ပါ သင်၏ပထမဆုံးအမှာစာ ၁၀% လျှော့စျေး!
Zapiet ၏ Shopify အက်ပလီကေးရှင်းသည်အလွန်အောင်မြင်သောကြောင့်သူတို့၏အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကဤအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းစတိုးဆိုင်တစ်ထောင်ကျော်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည်ထိုဖောက်သည်များအားသူတို့၏ app ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နေ့ရောညပါအလုပ်လုပ်သည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပါပဲ။ စတိုးဆိုင်ဝယ်ယူမှုကိုပိတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပိတ်ထားသကဲ့သို့လွယ်ကူပြီးအကျပ်အတည်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ၎င်းကိုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည်။ App တွင်ပါ ၀ င်သည့်ကောင်းမွန်သော message bar ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ zip code သို့ပို့ခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန် new ည့်သည်အသစ်များအားစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Store Pickup + Delivery ၏ထူးခြားချက်များ။
ကုန်ပစ္စည်းရရှိနိုင်မှု - ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကိုပစ်ကပ်ခြင်း၊
Shopify POS ပေါင်းစည်းမှု - In-store တွင်သင်၏ပစ်ကပ်နှင့်ပေးပို့မှုအော်ဒါများကိုကြည့်ရှုစီမံခြင်း
နေရာများစွာစာရင်း - ၀ ယ်ယူသူများအားနေရာတိုင်းတွင်နေထိုင်နိုင်မှုကိုစည်းညှိပြီးပြပါ။
အမိန့်စီမံခန့်ခွဲမှု - မည်သည့်နေ့ရက်သို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါ။
လိမ်လည်မှုတားဆီးရေး - အက်ပလီကေးရှင်း၏လုံခြုံရေးကုဒ်နံပါတ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်သင်၏အမိန့်များကိုလိမ်လည်မှုမှရှောင်ရှားပါ။
နေရာအကန့်အသတ်မရှိ - သင်၏တည်နေရာအားလုံးကိုအလွယ်တကူတင်သွင်းပြီးတစ် ဦး ချင်းစီစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်စိတ်ကြိုက် - ရရှိနိုင်မှု၊ breakpoints များ၊ offset များ၊ အလိုအလျောက်၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြားအရာများကိုသတ်မှတ်ပါ။
နေ့စွဲနှင့်အချိန်ရွေးသူ - တည်နေရာနှင့်ထုတ်ကုန်ရရှိနိုင်မှုကို ၅ မိနစ်အထိသတ်မှတ်ပြီးဖောက်သည်များကိုရွေးချယ်ပါ။
အပြည့်အဝသဟဇာတ - Deliv၊ Quiqup၊ Intuitive Shipping, Bespoke Shipping, Advanced Shipping Rules နှင့်အခြားအရာများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ အားလုံးကြည့်ရှုပါ Zapiet ၏ပေါင်းစည်းမှုများ.
အမိန့်ထောက်ခံမှုမူကြမ်း - တည်ဆဲမူကြမ်းအမိန့်များကိုပစ်ကပ်သို့မဟုတ်ပေးပို့သည့်အမိန့်များသို့ပြောင်းပါ။
Delivery slot ကန့်သတ်ချက်များ - ပေးထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပေးပို့မှုအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်အလွန်အကျွံ impen လုပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
Geodistance validation ကို - သုံးစွဲသူတည်နေရာပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သောစျေးနှုန်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလိုအလျောက်ပေးသည်။
သင်၏ပေးပို့နှုန်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လိုပါက Zapiet တွင် app တစ်ခုလည်းရှိသည် အဝေးသင်အားဖြင့်ပေးပို့နှုန်းထားများ or Zip Code မှပေးပို့နှုန်းထားများ။ Zapiet သည် ၁၄ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုပေးသည်၊ သို့ဖြစ်သောကြောင့်သင်လုပ်ငန်းအသွင်အပြင်နှင့်သင်လိုအပ်သည့်အရာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထိုအချိန်အတွင်းပယ်ဖျက်ပါကသင့်အားငွေမတောင်းပါ။
Zapiet စတိုးတည်နေရာတည်နေရာ + ပေးပို့ပါ
Tags: ပေးပို့ appအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ရေးအိမ်သို့အီလက်ထရောနစ်စတိုးဆိုင်ပစ်ကပ်shopifyShopify စတိုးဆိုင်ပစ်ကပ်Tyner ရေကန်လယ်ယာ